Eight အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
3.6 | 100,000+ ထည့်သွင်းရန်
ဒေါင်းလုပ် APK（38.1MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Eight: Visiting card scanner & digital card holder
ရှစ်သည် Ultimate Business Card စီစဉ်သူနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကွန်ယက်ပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။ လူ ဦး ရေ2သန်းကျော်အသုံးပြုသောရှစ်ခုသည်လွယ်ကူပြီးအဆင်ပြေချောမွေ့စွာအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။
သင်ရရှိသောမည်သည့်လာရောက်လည်ပတ်သည့်ကဒ်များကိုမဆိုရှာဖွေပါ။ ရှစ်ခုကို Card တစ်ခုစီကိုထူးခြားစွာဒီပရိုဖိုင်းရှစ်ခုသို့တိကျစွာဒီဂျစ်တယ်တစ်ခုအဖြစ်တိကျစွာဒီဂျစ်တယ်တစ်ခုအဖြစ်တစ် ဦး စီဒီဂျစ်တယ်တစ်ခုအဖြစ်တစ် ဦး စီဒီဂျစ်တယ်အဖြစ်ခွဲခြားရန်စီးပွားဖြစ်ပေါင်းစပ်ထားသောပေါင်းစပ်မှုပေါင်းစပ်မှုကိုအသုံးပြုသည်။
ရှစ်သည်အစွမ်းထက်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင့်အားအက်ပလီကေးရှင်းရှိစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးသောစီးပွားရေးကဒ်များနှင့်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်စေသည်။ အဆက်အသွယ်တစ်ခု၏ပရိုဖိုင်းမှသင်ခေါ်ဆိုမှု, အီးမေးလ်ကိုမြေပုံပေါ်တွင်ကြည့်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူရှစ်ယောက်သည်သတင်းနှင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းများကို၎င်းတို့၏ကွန်ယက်ရှစ်ခုဖြင့်မျှဝေနိုင်သည်သို့မဟုတ်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာအဆွေထောက်အအုံများကိုလက်ငင်းစာတိုများကို ဖန်တီး. တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ကစီးပွားရေးကတ်များကို scand လုပ်ခြင်းဖြင့် Contacts ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာဆက်နွှယ်နေစေရန်ကူညီသည်။
- အသုံးပြုသူများသည်ပိုမိုမြန်ဆန်သောဒီဂျစ်တယ်နှင့်ပိုမိုအကျိုးကျေးဇူးများအတွက်ပရီမီယံရှစ်ခုကို0ယ်နိုင်သည်။
- သုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏ကွန်ရက်များကို၎င်းတို့၏ကိရိယာများပေါ်တွင်စည်းညှိနိုင်သည်။ ချိတ်ဆက်ထားသောအဆက်အသွယ်များသည်၎င်းတို့၏စီးပွားရေးကဒ်ပြားပေါ်တွင်အသေးစိတ်ပြောင်းလဲပါကအချက်အလက်များကိုအလိုအလျောက်မွမ်းမံသည်။
Business Cards & Professional Networks) ကိုစုစည်းပြီးအသုံးပြုသူများသည်များသောအားဖြင့်စနစ်တကျလည်ပတ်နေသောကဒ်များနှင့် Biz ကဒ်များကိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည် နှင့်ရည်ညွှန်းကိုးကား။ ရှစ်သည်လက်စွဲစာအုပ်အတွက်လိုအပ်ချက်ကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်ဤပြ problem နာကိုဖြေရှင်းနိုင်သည့်အခမဲ့ဒီဂျစ်တယ်ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူဖြစ်သည်။ ယခုသင်၏မိုဘိုင်း cam ကို အသုံးပြု. ကဒ်များကိုချက်ချင်းဒစ်ဂျစ်မများနှင့်သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းပေါ်ရှိကဒ်၏အတိုအပိုင်းကိုအပြည့်အဝတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဒီလိုဒစ်ဂျစ်တယ်ရှစ်ခုကအသုံးပြုသူများသည် Profiles တွင်မှတ်စုများနှင့်တံဆိပ်များကိုထည့်သွင်းပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကဒ်စကင်နာ, ကိုင်ဆောင်သူ, စာဖတ်သူနှင့်စာဖတ်သူနှင့်စည်းရုံးသူဖြစ်သည်။
- အဆင့်မြင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုသေချာစေရန် manual inputs - ရှစ်ပိုင်းခြားထားသောပုံရိပ်မှ Digiticate Image မှ Digited Image မှ Digitized Image သို့ Digited Image သို့ Digitize သို့ Digited Ige သို့ Digitize သို့ Digited Image သို့ Digitize သို့ Digited Image သို့ Digited Ige သို့ Digitized Ice Card သို့ Digitied Digities သို့ Digitied Digitize လုပ်ရန် OCR နည်းပညာနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ သုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏ Biz ကဒ်များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးသည်နှင့်အတူ 8 ဦး သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းမှကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးပြီးတညျ့ကိုလက်ဖြင့်စစ်ဆေးပြီးပြင်ဆင်ထားသောအချက်အလက်များကိုချက်ချင်းဖတ်ရှုရန် OCR နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ အသုံးပြုသူများသည် E-Digital Biz ကဒ်များကိုရည်ညွှန်းရန်လွယ်ကူသည်။
- အက်ပ်အတွင်းမှအဆက်အသွယ်များကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်လွယ်ကူသောရှာဖွေမှုအင်္ဂါရပ် - ဤသည်မှာသင်၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကဒ်စကင်နာသို့မဟုတ်ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေးကဒ်ကိုင်ဆောင်သူမဟုတ်ပါ။ အသုံးပြုသူများသည်အဆက်အသွယ်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အီးမေးလ် (သို့) ဖုန်းမှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အထူးသဖြင့် ဦး ဆောင်လမ်းပြပို့ဆောင်ရန်နှင့်ပြောင်းလဲရန်အတွက်အထူးသဖြင့်အထောက်အကူပြုသည်။
- ပရီမီယံအင်္ဂါရပ်များ0ယ်ရန် Option တစ်ခုဖြင့် Basic app ကိုအသုံးပြုရန်အခမဲ့အသုံးပြုရန် - အက်ပလီကေးရှင်း၏စံဗားရှင်းသည်အခမဲ့ အသုံးပြု. အခမဲ့ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်4င်းတို့၏အချက်အလက်များကိုတင်ပို့နိုင်စွမ်းအပါအ0င်နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးများအတွက်ပရီမီယံရှစ်ခုကို0ယ်နိုင်သည်။ သုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏လည်ပတ်မှုကဒ်များနှင့် Biz ကဒ်များကို OCR အသုံးပြု. EOC Business Card များသို့ပြောင်းလဲရန်သာမက၎င်းတို့အားသူတို့၏ E စီးပွားရေးကဒ်အချက်အလက်များကိုသူတို့၏ကိရိယာများသို့တင်ပို့နိုင်သည်။
- ကွန်ယက် - သင်၏စီးပွားရေးကဒ်များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရုံသာမကသုံးစွဲသူရှစ် ဦး ဖြစ်သောသင်၏အဆက်အသွယ်များနှင့်ဆက်နွှယ်သည် ထို့ကြောင့်အစာကျွေးသောအစာသည်သင့်အားသင်၏ကွန်ယက်မှစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများနှင့်အချိန်မီမွမ်းမံမှုများနှင့်သင့်အားလုံလောက်စွာဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
အချုပ်အားဖြင့်ရှစ်ခုသည်ပျမ်းမျှ visiting card scanner app ထက်များစွာပိုသည်။ ၎င်းသည်အဆက်အသွယ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကူညီခြင်းအတွက်အဆက်အသွယ်အမည်များ, ဘိုင်ဘော့ကဒ်များ,
ဘာအသစ်လဲ Eight: Visiting card scanner & digital card holder 9.64.0
Digital Cards Features FB
eez Apps Digital Cards Features